भिडियो Archives - Filmy Hotline
नाई नभन्नु ल ५’ पूरा फिल्म युट्युबमा सार्बजनिक (भिडियो सहित)
विकास आचार्यको निर्देशन रहेको चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल ५’ को पूरा फिल्म युर्युबमा सार्वजनिक गरिएको छ । हलमा सार्बजनिक भएको निक्कै पछि युट्युबमा सार्बजनिक भएको फिल्ममा दीलिप रायमाझी, निरुता सिंह, केकी अधिकारी, प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्का, अनुभव रेग्मी, सेड्रीना शर्मा, अभिषेक नेपाल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ । पुरुषोत्तम प्रधानको छायाँकन, विकास आचार्य र सामिप्यराज तिमल्सिनाको लेखन, वसन्त सापकोटाको संगीत र अर्जुन जिसीको सम्पादन रहेको चलचित्र ८ भदौबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउँदैछ । यो फिल्मले राम्रै चर्चा पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौँ। चर्चित बाल गायक अशोक दर्जी र एआर बुढाथोकीलाई एक म्युजिक भिडियोको छायांकनको क्रममा भेटिएका छन । अशोक दर्जीको पहिलो गित मन बिनाको धन ठुलोकी धन बिनाको मन निक्कै लोकप्रिय बनेको थियो । त्यसपछिको चौरीको चाम्रो छुर्पी पनि त्यत्तिकै हिट भएको थियो । हिजो आज म्युजिक भन्दा पनि अशोक आफ्नो पढाईलाई प्राथमिकता दिदै आएका छन । आज अशोक र साथी एआर एक म्युजिक भिडियोको छायांकनको क्रममा बाइकमा गर्लफ्रेन्डलाई चढाएर हिडेको अवस्थामा भेटिएको छ । भिडियो हेर्नुहोस :
काठमाडौँ । ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही माथि प्रहरीले दिएको यातनाको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । विना पुर्जी पक्राउ गरेर लछारपछार गरेर लागि निर्ममता पुर्वक कुटेको देख्दा सरकारकै निर्देशनमा कारवाही भएको डा. सुरेन्द्र भण्डारीको अनुमान छ। उनले सरकार भ्रष्टचारमा लिप्त भएको भन्दै भने, ‘उनलाई पक्राउ गरी यातना दिएको हेर्दा सरकारले भ्रष्टचारको संरक्षण गरेको देखिन्छ। जुन प्रहरीले यस्तो हर्कत गरे सरकारले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्नेछ नगरे हामी सरकारविरुद्ध उठ्नेछौ।’ प्राप्त जानकारी आनुसार, शाहीलाई प्रहरी चौकीमा हात बाँधेर २० मिनेटसम्म लौराले कुटेर शरीर भरी निल डाम बनाइनु र हत्यारालाई जसरी हत्कडी लगाएर खान, पिसाव फेर्न समेत नदीई सुर्खेत देखि काठमाडौँसम्म सार्वजनिकबसमा लाइएको हो। उनको हाल राजधानीको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भईरहेको छ। उनको ठाउँको, हात, खुट्टा र ढाडमा पटक-पटक
काठमाडौं (पुष्पलता आचार्य)म श्रीमानको कान्छी श्रीमती थिए । मेरो सौता दिदी पनि हुनुहुन्छ । छोराछोरी छन् । मैले श्रीमानलाई पहिलै भनेको थिए यदि तपाइको मेरो भन्दा पहिला मृत्यु भयो भने तपाइले दिएको उपहार बाँचुन्जेल जोगाउने छु । चुरा, धागो, पोत, सिन्दुर भन्दा अरु के हुन सक्छ एउटी नारीको लागी श्रीमानको उपहार ? त्यसैले मैले अरु केही गरेको होइन श्रीमानको उपहारलाई उपयोग गरेको हुँ । अनी अर्का कुरा महिला पुरुष बिच जुन किसिमको असमानता छ त्यसलाई चिर्ने मेरो उद्देश्य हो । काम राम्रो होस या नराम्रो सुरुवात गर्नेले ताली र गाली खानु स्वभाविक हो । राम्रो काम गर्नेले त आरोपको सामना गर्नुपर्छ भने मैले त पितृसतात्मक राज्यसत्ताको विपक्षमा काम गरेको थिए । आरोप आउनु कुनै ठूलो कुरा होइन । तर आरोपको सामना गर्न सक्ने की नसक्ने भन्ने ठूलो कुरा हो । त्यसैले आरोप र आलोचनादेखि म कहिलै पनि हतास भइन । मलाई थाहा थियो की
अष्ट्रेलिया स्थित नेपाली राजदुत मानव तस्करी मुद्धामा ओली सरकार मौन, AIBT आजबाट खारेज !
१. अष्ट्रेलिया स्थित नेपाली राजदुत मानव तस्करी मुद्धामा सरकार मौन ! अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलिया स्थित नेपाली दुतावासमा तत्कालीन राजदुत लक्की शेर्पाले चालकका रुपमा लगेका वाङछ् शेर्पाले राजुदतले आफूसँग ३३ लाख बढी लिएर अष्ट्रेलिया ल्याएको भन्दै करीब ६ महिना अघि सीधाकुरा जनतासँग कार्यक्रम लाइभ बोलेका थिए । यसपछि राजदुत शेर्पा विवादित बनिन् र आफ्नो पदबाट राजीनामा नै दिइन् । २. अष्ट्रेलियामा एआईबीटी इन्टरनेशनल कलेजसमेत खारेज, थप नेपाली विद्यार्थी मारमा अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियामा ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका एआईबीटीको अर्को कलेजसमेत खारेज भएको छ । पहिलो पटक एआईबीटीमा अध्यनरत विद्यार्थीहरुले हाम्रो लाइभ कार्यक्रममा यो बिषय उठाएका थिए । अष्ट्रेलियामा ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी अध्यन गर्दै आएका इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट अफ विजनेश एन्ड टेक्नोलोजी एआइबीटीको दर्ता खारेज भएको क
११ बर्षमै आमा बन्छु भन्ने के थाहा ? शारीरिक सम्बन्ध राख्दा कलिलै उमेरमा बच्चा जन्मियो (भिडियो)
काठमाडौँ । गेरुवा गाउँपालिका- ४ खोनपुर बर्दियाकी भावना बस्नेत ११ वर्षमै आमा बनीन् । ०६३ चैत्र १३ गते जन्मिएकी बस्नेतले ०७५ फागुन ७ गते माइतीमा नै छोरीलाई जन्माइन् । गाउँ कै सरस्वती आधारभूत विद्यालय कक्षा ७ मा पढ्दै गरेका १४ वर्षीय नन्द रावतसँग शारीरिक सम्बन्धले भावनालाई यतिखेर कष्ट पूर्ण अवस्थामा पुर्याएको हो । रावतसँग प्रेम रहेकै बेला उनले शारीरिक सम्बन्ध कायम गरेपछि उनको पेट बढ्दै गएको उनका परिवारले पत्तै पाएनन् र अन्तत उनले स्वास्थ्य संस्थामा समेत नपुगी ११ वर्ष १० महिना २४ दिनको उमेरमा सुत्केरी भई छोरीलाई जन्म दिइन् । जसको नाम पूर्णिमा राखियो । घर मै सुत्केरी भएकी भावना र बच्चाको अवस्था सामान्य रहे पनि उमेरका कारण दुवैको स्वास्थ्य जोखिम पूर्ण अबस्थामा छ। यतिखेर बस्नेतको शरीर सुन्निने र ज्वरो आउने समस्याबाट निकै पीडित छिन्। १४ बर्षमा बाबु बनेका नन्द काठमाडौं आएर आमा र छोरी पाल्नकै लागि
राजसंस्था फर्किने कुरा त कल्पना भन्दा बाहिर, तर प्रधानमन्त्री ओली भने राजा हुनसक्छन् (भिडियो)
काठमाडौ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले नेपाल आजसंगको भेटमा हाकाहाकी भने, ‘ मुलुकमातर अ राजसंस्था फर्किने कुरा त कल्पना भन्दा बाहिरको हो तर अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली भने राजा हुनसक्छन् । कम्युनिष्टहरु राजशाही फर्काउने अभियानमा छन् र ओलीलाई राजा बन्ने रहर छ । ’ यो भनेको बर्तमान सरकार अधिनायकवादको बाटोमा छ । यो सरकार निरंकुशता लाद्न उद्धत छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो पार्टी र सरकारमा जसरी अधिकार केन्द्रीत गर्दै सम्पूर्ण शक्ति आफनो हातमा लिएर अघि बढने अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यसले उनको राजा बन्ने लालशा पुष्टि गर्छ । ओलीको ‘उन्माद’ र प्रचण्डको ‘डर’ – यो कम्युनिष्ट सरकार आफनो एकदलिय शासन लाद्न चाहन्छ । यसका लागि ओली जोसंग जे जस्तो भएपनि सम्झौता गर्न तयार छन् । हिजो माओवादी केन्द्रसंगको एकता पनि कांग्रेसलाई देखाइदिनकै लागि भएको थियो । शक्तिशाली बन्ने ओलीको उन्माद र राजनीतिबाटै समाप्त हुने पु
काठमाडौं। महिलाहरु प्रायजसो गर्भवती भएको थाहा पाउन प्रेग्नेन्सी किटको प्रयोग गर्ने गर्छन् । कतिपय महिलाहरु मेडिकलसम्म गएर किट ल्याउन लजाउने हुन्छन् । महिलाका लागि आवश्यक प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्न घरेलु तथा प्राकृतिक तरीका पनि अपनाउन सकिन्छ । जसले गर्भवती भए नभएको पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ । दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने टुथपेस्ट सबैको घरमै हुन्छ । गर्भवती भएको पत्ता लगाउन शारिरीक सम्पर्क भएपछि महिलाले टुथपेस्टमा आफ्नो पिसाव मिसाउने, यदि पेस्ट नीलो भएमा सम्झिनुस् कि टेस्ट पोजिटिभ छ । अर्थात तपाई गर्भवती हुने सम्भावना रहन्छ । यदि तुरुन्त प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्ने हो भने घरमै रहेको भिनेगरको प्रयोग गर्न सकिन्छ । भिनेगरमा पिसाव मिसाउँदा रंगमा कुनै परिवर्तन आएमा बुझ्नु पर्छ कि टेस्ट पोजेटिभ अर्थात् गर्भवती भएको संकेत हुन सक्छ । प्राचिन कालमा गर्भवती टेस्ट गर्नका लागि गहुँ वा जौको प्रयोग गरिन्थ्यो । गह
विदेशी श्रीमानसँगै पहिलो पटक मिडियामा आईन फूल फुलेर पहेँलै भयो कि गायिका
लोकप्रिय लोक गायिका सम्झना लामिछाने मगर स-परिवार सहित मिडियामा देखिएका छन।बिबाह गरेको लामो समय पछि मिडियामा देखिएका हुन् यी जोडी।फुल फुलेर पहेलै भयो,घरमा परल बारीमा बन्सो लगाएतका गीतबाट सम्झना चर्चामा रहिन भने उनका अन्य गीतहरु पनि चर्चामा छ। सम्झना लामिछाने मगर र उनको श्रीमान खासै संगै बस्न भने पाएका थिएनन्।बर्षौ पछि एक साथ् भेटिएका यी जोडी र छोरा समेत सम्झना मिडियामा आएका हुन्।परिवार सुरुमा भने खासै मिल्न सकेको रहेनछ पछि बुझ्दै गए पछि श्रीमतीलाई बुझ्न सकेको उनका श्रीमान बताउछन हेरौ भिडियो:
आयो अभिनेता दयाहाङ राई र अभिनेत्री दीया पुन अभिनीत फिल्म ‘दयारानी’ को छमछमी नाच्ने गीत
अभिनेता दयाहाङ राई र अभिनेत्री दीया पुन स्टारर फिल्म ‘दयारानी’ को पहिलो गीत नयाँ वर्ष २०७६ को अवसरमा सार्वजनिक भएको छ । 'चिरी च्याट्टै' बोलको गीतमा राजनराज सिवाकोटीको शब्द, संगीत र स्वर छ । उनलाई गायनमा गायिका मेलिना राईले साथ दिएकी छन् । लोक फ्लेवरमा ढालेर तयार पारिएको गीतमा दया र दीया फिचर्ड छन् । विक्रम स्वाँरको कोरियोग्राफी रहेको गीतको भिडियोलाई रवि न्यौपानेले खिचेका हुन् । 'सुर्के थैली खै ?', 'चेप्टे चेप्टे पेरुङ्गो', 'गोजीमा दाम छैन' जस्ता लोकप्रिय गीतका सर्जक राजनराजको खातामा अर्को हिट नम्बर थपिने निश्चित छ । 'चिरी च्याट्टै' गीतका शब्दहरु सजिलै मुखमा झण्डिने खालका छन् । भिडियोमा पनि निर्माण टिमले रामै मिहिनेत गरेको देखिन्छ । दया र दीयाको केमेस्ट्री उस्तै कमालको देखिएको छ । यो फिल्मलाई कलाकार तथा निर्माता माओत्से गुरुङले पहिलो पटक निर्देशन गरेका हुन् । जेठ १० गतेबाट देशभर प्रदर्शनम